My Geofumadas - Geofumadas
Fihetsehana, fanadihadiana ary fanavaozana
Moa ve isika misitrika tokoa amin'ny dingana "vaovao" amin'ny 3D Spatial?
"Ny fanerena bokotra dia mety hanokatra refy hafa", hoy ny nosoratany, teo am-pamaranana ny lahatsorany, Muthukumar Kumar, miresaka manokana ny famoronana tontolo 3D, ny mahasoa, ny maha-zava-dehibe ary ny ho avy. Mariho fa ny miresaka momba ny ho avy, amin'ny fomba izay manalavitra antsika amin'ny charlatanisme tsotra dia takiana io teny io ...
jeospatial - GIS, fanavaozana, My egeomates
Ny fahafaha-miasa izay mifantoka amin'ny GIS. Fiction mifanohitra amin'ny zava-misy
Rehefa avy namaky lahatsoratra iray aho izay nanomboka tamin'ny fanontaniako hoe inona no tena tadiavin'ny mpampiasa GIS dia nanontany tena aho hoe hatraiza ireo fehin-kevitra ireo dia azo esorina amin'ny firenentsika izay mety hitoviana na tsy hitovy (mety tsy hitovizany) amin'ny anao ny zava-misy. Ny 'akora' ampiasaina amin'ny fianarana dia tolotra avokoa ...
jeospatial - GIS, My egeomates
Blockchain sy Bitcoin ampiharina ny tany Administration
Tao amin'ny kaongresy momba ny haitao vaovao dia nanatona ahy ny tonian-dahatsoratry ny magazine iray, izay nanontany ahy momba ny fampiharana an'io karazana haitao io eo amin'ny sehatry ny Fisoratana anarana momba ny fananana, Cadastre ary fitantanana fananana amin'ny ankapobeny. Nahaliana kokoa ny resaka, na dia somary gaga ihany aho fa nanontany ahy izy, rehefa nandinika ...
cadastre, Featured, fanavaozana, My egeomates
Tany lisitra ao anatin'ny iray National Transactional System
Isan'andro ny firenena dia mifantoka amin'ny fironana e-governemanta, izay manamora ny fizotrany amin'ny fitadiavana tolotra tsara kokoa ho an'ny olom-pirenena, ary koa ny fampihenana ny sisin'ny kolikoly na ny birao tsy ilaina. Fantatsika fa ny lalàna, andrim-panjakana ary ny fizotrany mifandraika amin'ny fananana isam-pirenena dia ...
cadastre, Featured, jeospatial - GIS, My egeomates
Ny georeferansa anatiny
Rehefa mamaky ireo teoria isan-karazany izay manohana ny fifandraisana ampiasain'ny cartografia isika, na siansa hisolo tena ny tranga ara-jeografika sy ho zavakanto hanomezana ity fampahalalana ity ireo estetika ilaina, dia takatsika fa ny fotoana iainantsika dia misy hetsika maro amin'ny fiainantsika andavanandro. izay ampiasantsika ny georeferity ho hetsika ...
jeospatial - GIS, GPS / Fitaovana, My egeomates